Praiministra neozelandezy : tokony hahazo ny loka Nobel momba ny fandriampahalemana ? – jEreo Ato
Rédacteur et Développeur Web Publié le 28 mars 2019 28 mars 2019 - 2 minutes de lecture Catégories SociétéÉtiquettes Fanafihana, Jacinda Ardern, Nouvelle-Zélande
Nisarona voaly mainty i Jacinda Ardern sady namihina vehivavy silamo nalahelo
Valo ambiny folo volana monja no nandraisany ny toerany, nefa efa nisedra olana goavana ny fireneny. Jacinda Ardern no Praiministra neozelandezy amin’izao fotoana izao. Ary nametraka ny maha-izy azy sahady ity vehivavy Praiministra ity tamin’ny loza nanjo ny tany misy azy.
Raha tsiahivina, ny 15 marsa lasa teo dia moské roa tany amin’ny tanàna atao hoe Christchurch any Nouvelle-Zélande no nisy nanao fanafihana. Lehilahy mpampihorohoro ostraliana iray, antsoina hoe Brenton Tarrant, no nahavanon-doza. Taorian’izany dia voaisa fa 49 no namoy ny aina ary maro ireo naratra vokatr’izany.
Ny andro nisian’io fampihorohoroana mampihoron-koditra tany an-toerana io dia anisan’ny fotoana mangidy indrindra ho an’ny mponina neozelandezy. Voakasika manokana tamin’ny tranga ny filohan’ny governemanta, Jacinda Ardern.
Miara ory amin’ny malahelo
Noho ny faty olona mikararana nisy, dia tsy nipetra-potsiny ny Praiministra. Nanambara ny firaisany ory sy ny fampaherezany ny fianakavian’ny tra-doza ary koa ny fianakaviamben’ny silamo any amin’ny taniny izy. Naneho ny firaisan-kinany ihany koa ity vehivavy ity ka nanambara fa “isika ihany izy ireo [ireo silamo lavon’ny bala]”.
Ankoatr’izay dia nilaza ny tsy hanonona ny anaran’ilay mpampihorohoro ny tenany, noho ny zavatra nataony. Etsy ankilany, nisy fotoana hita nisarona voaly mainty i Jacinda Ardern sady namihina vehivavy silamo nalahelo nohon’ny fampihorohoroana tany Nouvelle-Zélande. Nilaza ity olom-panjakana ity fa ny ho raisina an-tanana ny momba ny fandevenana ny maty rehetra tamin’izany.
Araka ny hita dia, niarahaba ny fihetsika nataony ny karazan’olona maro : firenena samihafa, haino-aman-jery, mponina. “Fahendrena ao anaty fahatoniana, fahasahiana ao anaty tery”, fihetsika anisan’ny tian’ny olona tany aminy. Misy noho izany rehetra izany ny fanangonan-tsonia tao amin’ny tranonkala Change.org mba hahazoan’ity Praiministra vehivavy ity ny loka Nobel momba ny Fandriampahalemana.
Raha ny vaovao dia olona miisa 53.000 no efa nametraka ny soniany tamin’ny Alarobia teo.
Amin’izao fotoana izao moa dia tsy azo atao ny manana fitaovam-piadiana any Nouvelle-Zélande. Ho fanarahana izany dia aman-jatony ny mponina any an-toerana no namerina ny basiny any amin’ny polisy neozelandezy. Ho hitantsika eo ihany ny tohin’ity raharaha ity.
Sary : Getty Images